Phumelela 10 Pro
Phumelela 10 Ekhaya
Phumelela 7 Pro
Office 2016 Ibanga
● 100% original evela MS online activition, isitshixo zomthetho
● Izinto ezinokuthi zisetyenziswe ngokusisigxina musani ukuba undithela ukuvimbile
● Made in USA ungenziwa ngemfuneko. Singenza nantoni na ofuna
Intlawulo: T / T, WU
Ukuhanjiswa: DHL, EMS, FedEx
Yovulo: By Internet
Lokuqinisekisa: MS Partner
Ulwimi: IsiNgesi / Korean
Packaging: FPP neRiteyili
Microsoft Office 2016 Standard Ireland Original 1User 1SP Ufakelo DVD kunye Card Key
Amagama Key: ofisini 2016 umgangatho, 2016 standard,
Intlawulo & Shipping Imiqathango:
Ubuncinane Order Ubungakanani:
Factory ibhokisi Kwavingcelwa Uthutho nokuStorisha Utshintshiselwano
100, 000 ii-PC / Inyanga
Microsoft Office 2016 kunceda ukuba wenze umsebenzi wakho okusemandleni - naphi na, nanini na yaye nabani na. , Iinguqulelo ezintsha mihla izicelo desktop zakudala, iLizwi, Excel, i-PowerPoint, Outlook, ne-OneNote, yakhekani ngokuba nemveliso ubuninzi. Niya ngokukhawuleza ukuvelisa amaxwebhu yobuchule kunye neempawu etyebileyo ngokuhlela, ulawulo yoyilo ubeko pixel-ogqibeleleyo kunye nezixhobo ongenantandabuzo ukukunceda wenze kakuhle data yakho. Uza ukufikelela doc zakho efini xa ucela uncedo kubo. Namaxwebhu yakho igcinwe intanethi, kulula ukufumana iqela lakho kwiphepha efanayo. Share, langoku kwaye ayasebenzisana kuyo iiprojekthi kwakhiwa izixhobo iqela ngentsebenziswano lonke lweenkqubo kwisuti.
Iprosesa: 1 gigahertz (GHz) okanye ngokukhawuleza x86 okanye x64-bit iprosesa ne SSE2
System zokusebenza: Windows 7 okanye kamva, Umncedisi 2008 R2, okanye Windows Server 2012 yeWindows
Hard Disk Space: 3.0 GB disk
Bonisa: 1024 × 576 isisombululo
Graphics: ukukhawulezisa yemizobo iintsimbi ifuna iDirectX ikhadi yemizobo 10
Multi-touch: A isixhobo touch-enabled kufuneka ukusebenzisa nayiphi ukusebenza lochukumiso. Nangona kunjalo, zonke iimpawu kunye nokusebenza zisoloko zifumaneka ngokusebenzisa i keyboard, mouse, okanye esinye isixhobo umgangatho okanye zifikeleleke igalelo. Qaphela ukuba iimpawu ezintsha kwebala ukuba elungiselelwe ukusetyenziswa Windows 8 okanye kamva.
Iimfuno ezongezelelweyo: usebenziso Internet ifuna uqhagamshelwano Internet. iakhawunti yeMicrosoft efunekayo.
Siyazi ukuba sele ukhangela okulungileyo, oluzinzileyo, isitshixo sokuqala, ngoko sithemba ukuba akuyi sikhohliswe cheap ishishini, abangenabuchule emarikeni. Imigudu yethu ubonelelo zonke ukususela MS, i siqinisekiso, hayi iqhosha lokwenene isitshixo fake oxutywe up.
Ngoko ukuze kuqinisekiswe ukuba bonke abathengi inkampani yethu, ukuba bathenge iimveliso kubathengi endinokubathemba ngokupheleleyo kwethu, khon 'ukuze iimfuno ngumthengi akayi nokuba yonakele. Kwakhona enkosi nomonde wakho ekufundeni intshayelelo yethu imveliso.
Ndiyathemba ungenza uqhagamshelane nathi, mna ndiyakholwa uya kufumana iqabane loshishino elungileyo, Buhlaziyeke umgangatho kweempahla zenu ziya alunakuqinisekiswa.